काठमाडौा । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेविसंघले संगठन विस्तारमा काम नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वसभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेविसंघले गाउँगाउँमा, स्कुलस्कुलमा नेविसंघ बनाउन नसक्ने, तर काठमाडौंमा भाषण गरेर बस्ने प्रवृत्तिले नेविसंघ कमजोर बनेको भन्दै नेविसंघ नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । अहिले गाउँ, ठाउँ, स्कुल कतै पनि नेविसंघ नरहेको र कुनै पनि स्कुलमा जित्ने हैसियत नेविसंघले नराखेको भन्दै आक्रोशित भए ।
पहिला गाउँ र स्कुलमा गएर नेविसंघ बनाएर मात्र आफूसँग कुरा गर्न आउन उनले नेताहरूलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘राम्रोसँग गर्नुस, नेविसंघलाई बलियो बनाउनुस् । गाउँठाउँमा सबै स्कुल–कलेजमा जित्नुस् । जहाँ पनि हारेको हार्‍यै छ, नेविसंघ लाज पनि छैन । हामीले सबै ठाउँमा जितेका थियौँ । नेविसंघ कहाँ छ आज ? गाउँमा छ ? स्कुलमा छ ? अहिले गाउँमा कहीँ पनि नेविसंघ देखिँदैन । गाउँ, स्कुलमा जबसम्म नेविसंघ हुँदैन तबसम्म कहिल्यै पार्टी बलियो हुँदैन । त्यही नेविसंघ त हो नि पार्टी भन्ने । कहाँ छ नेविसंघ ? कतिपल्ट भन्ने ।
कहिले सभापतिलाई भनेँ– ए बाबा गाउँमा बोलाऊ गाउँमा । स्कुलमा नेविसंघ बनाऊ, बनाउँदै बनाउँदैनन् । अनि हारेकोहार्‍यै छ । सबै ठाउँमा कहाँबाट कम्युनिष्टले जित्यो यहाँ । कसरी जिते कम्युनिष्टहरु । उनीहरुले गाउँगाउँमा बनाए । काठमाडौंमा आएर भाषण गरेर केही हुनेवाला छैन । गाउँमा जाऊ गाउँमा । गाउँमा बनाऊ, गाउँको स्कुलमा बनाऊ नेविसंघ अनि मात्र झगडा गर्न आऊ । केही नगर्ने मसित कुरा गर्ने ?’
उनले अहिले नेविसंघभित्र देखिएको विवाद केही पनि नभएको र दुई पक्षबीच कुरा गरी समस्याको समाधान निकालिने बताए ।